Ngwa mkpuchi - Delta Ngwa Technics
Gịnị kpatara ọrụ @ Delta Ngwa Technics
Sistemu igwe otutu
Ugbo elu ikuku
Tlekwà mkpuchi ọkpọ
S egbe / Valves
Egbe na-ere egbe dị ọkụ
Arịa arịa nrụgide SS
Ngwọta akpaghị aka
Nrụnye / dolle
Banye na otu "Ngwa mkpuchi"
Sistemu eji agba agba agba akpaaka
Tọzdee, 20 Jenụwarị 2015 by Delta Injinịa
Sistem maka ngwa agba agba akpaka
Na-eche ka imegharị ngwa ihe osise gị na akpaaka? Applicationlọ Ọrụ Ngwa Ngwa Delta nwere ike inyere gị aka na sistemụ ihe eji emepụta agba nwere aka iji dozie ihe gị (ATEX) ma ọ bụ agba mmiri na ngwaahịa gị n'ụzọ ziri ezi.
bipụtara dị iche iche
Sistem ngwa mkpuchi ihe
Sistem maka ụdị mkpuchi dị iche iche
A na-enweta sistemụ maka itinye ihe mkpuchi nke ngwaahịa viscous dị ala dị ka mmanụ, mmiri, mkpuchi agbapụta ọkụ, wdg Ọzọkwa ATEX sistemụ dị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ngwa gị, egbula oge ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Nrụnye ikuku na-enweghị ikuku
Standardlọ ọrụ nrụnye ọkọlọtọ ikuku enweghị ike iji kpuchie ọtụtụ ngwa dị iche iche. Enwere ike iji fesaa elu nke agba, varnishes, wdg.
Maka nkọwa ndị ọzọ, kpọtụrụ ndị ahịa anyị.
bipụtara Ofufe ikuku
Nrụnye nke Airspray
Sistemụ ntinye na ntinye iji fụchie, adhesives na mmiri viscous ndị ọzọ dị ala site na ikuku ikuku. Enwere ike iji ha jiri aka rụọ ọrụ nke ọma, dabere na mkpa gị na usoro mmepụta gị.
Kpoo ndi ahia anyi maka inweta ihe omuma.
bipụtara Ugbo elu ikuku
Ibe mkpuchi nke karama plastik na mkpuchi mgbochi agha
Emeputara spraycoater (DSC100) iji nagide nsogbu na mmachi nke karama PET. A na-awụnye ihe mkpuchi a na-egbochi ihe a na-agbanye n'ime karama PET iji zere inwe nsogbu na ejupụta na nkwakọ ngwaahịa ahụ ma kpochapụ ọnya ndị dị na mpụga elu karama ahụ. Enwere ike ịchọta nkọwa ndị ọzọ gbasara ọrụaka n'okpuru pdf-folda.
bipụtara Tlekwà mkpuchi ọkpọ
►Sistemu igwe otutu
►Ugbo elu ikuku
►Tlekwà mkpuchi ọkpọ
►dị iche iche
►S egbe / Valves
© Delta Ngwa Technics. Ikike niile echekwabara.
Nke a bụ usoro enweghị paswọọdụ.
Biko tinye adreesị email ụlọ ọrụ gị.
A ga-ezitere gị otu njikọ ozugbo.
Ndị amabeghị ga-eburu ụzọ kwado ihu ọma.
Ndị ọrụ Delta
Emeela ka akaụntụ gị rụọ ọrụ, ịnwere ike ịbanye na akaụntụ gị.
Biko hapụ ka ndị na-ahụ maka ndị ọrụ anyị rụọ ọrụ oge ụfọdụ.
E zigalarị njikọ njikọ gị na ozi ịntanetị gị. Biko lelee igbe mbata na Spam gị. A ga-emepụta njikọ ọhụrụ ịdebanye aha na zipu ozi na nbanye naanị mgbe ọ gachara 24 awa
E zigalarị ozi nnabata gị na ozi ịntanetị gị. Biko lelee igbe mbata na Spam gị. A ga-emeputa njikọ nbanye ọhụrụ akpaka zitere gị ozi nbanye naanị mgbe ọ gachara 120 nkeji
Biko gosi na adreesị ozi-e gị site na ịpị njikọ anyị zitere na e-mail gị.
Biko jiri e-mail gị banye.
E zitere gị ozi nwere ozi na ebe abanye abanye.
Maka ebumnuche nchekwa, aga-eziga email na . Biko pịa njikọ dị n'ime email a iji nweta ohere ịbanye na weebụsaịtị.
E zitere gị akwụkwọ ozi nwere njikọ aha ndebanye aha gị. Biko lelee igbe mbata na Spam gị. Njikọ ahụ dị irè maka 24 awa.
Tinye IN / REGISTER
Enwere ike iji njikọ nbanye banye na kọmputa.
Sava anyị anaghị arụ ọrụ, biko nwalee ọzọ ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.
Sava anyị weghachiri njehie, biko nwaa ọzọ ma emechaa.
Sava anyị weghachiri profaịlụ zuru ezu, biko nwaa ọzọ ma emechaa.
Njikọ mbanye gị emebiela. Biko jiri e-mail gị mepụta njikọ ọzọ abanye.